CRACKDOWN MALAYSIA 1.9.2013 မှ ယနေ့ နံနက်စောစောအထိ ဖမ်းဆီးမှုသတင်းများ အပြည့်အစုံ-VIDEO | democracy for burma
CRACKDOWN MALAYSIA 1.9.2013 မှ ယနေ့ နံနက်စောစောအထိ ဖမ်းဆီးမှုသတင်းများ အပြည့်အစုံ-VIDEO
tags: Burma, Crackdown, illegal migrants, malaysia, Myanmar, OPS 6P, Video
မလေးရှားရောက်မြန်မာများအားလုံး သိထားခဲ့ပြီးဖြစ်သော ယမာန်နေ့ကမလေးရှားနိုင်ငံ အနှံ့အပြားမှာ တရားမဝင်နေထိုင်သူများကိုဖမ်းဆီးမှု အစီအစဉ်များ နေရာ 50 တိတိ တွင် တစ်ပြိုင်တည်း စတင်ခဲ့သည် ။
မလေးရှားနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ တရားမဝင်နေထိုင်သူများ နှိမ်နင်းမှု့အစီအစဉ်လို့နာမည်ပေးထားတဲ့ OPS 6P ရဲ့ ညွန်ကြားရေးမှူး ဒါရိုက်တာ Immigration Department deputy director (Enforcement) M. Saravana Kumar ပြောပြချက်အရ ယနေ့တစ်ရက်တည်း တရားမဝင်နေထိုင်သူ 2433 ဦးဖမ်းဆီးရမိပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည် ။
စုစုပေါင်း စစ်ဆေးရန် ဖမ်းဆီးခဲ့သည့်အရေအတွက်မှာ 8105 ဦးဖြစ်ပြီး ထိုထဲတွင်မှ တရားဝင်စာရွက်စာတမ်းမပြည့်စုံသူ ၊ အိုဗာစတေး သမား 2433 ယောက်ကို ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်ကြောင်း မစ္စတာ ကူးမားက ကြော်ငြာသည် ။
2433 ဦးတွင် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံသား 717 Indonesians, Myanmar (555 persons), Bangladesh (387 persons), and Nepal (229 persons)
နှင့် အခြားနိုင်ငံသားများဖြစ်သည့် Cambodia, Vietnam, India, Pakistan, Philippines, China, Nigeria နှင့် Thailand နိုင်ငံသားများ ပါဝင်ကြောင်းသိရသည် ။
အရာရှိ၏ပြောကြားချက်အရ အထက်ပါ ပမာဏသည် တစ်ရက်တည်း အတွင်း ဖမ်းဆီးရရှိမှု့ဖြစ်ပြီး လာမည့် နှစ်ကုန်အထိ ဆက်တိုက်ဖမ်းဆီးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားသွားခဲ့သည် ။
ထပ်မံပြီး ဖမ်းဆီးရရှိသူများ ၏ ရင်ဖွင့်သံများကို Thestar သတင်းစာက အောက်ပါအတိုင်း ယနေ့တင်ပြသွားခဲ့သည် ။
အသက် 44 နှစ်အရွယ်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံသား ကိုအောင်အောင် နှင့် Thestar သတင်းစာ၏ မေးမြန်းမှုတွင်္င် ကိုအောင်အောင်မှ
” ကျွန်တော်တို့မလေးရှာကိုလာတာ မလေးရှားမှာ ဒုက္ခာရှာတာမဟုတ်ပါဘူး ၊ အလုပ်လာလုပ်တာပါ ၊ အိုဗာစတေးလဲ ဘယ်သူမှ မနေခြင်ကြပါဘူး ၊မိသားစုကို ပိုက်ဆံပြန်ပို့မယ် ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပဲကျွန်တော့်မှာရှိပါတယ် ..
မြန်မာပြည်ကို ပြန်ပို့မယ်ဆို့တဲ့အတွက်တော့ စိုးရိမ်ပါတယ် အေးဂျင်းနဲ့ပြန်တိုးတဲ့အခါကြတတော့ 5000 ရင်းဂစ်ကုန်ကျမယ်လို့သိရပါတယ် ကျွန်တော် 5000 နဲ့ ပါမစ်အပ်ခဲ့ပေမယ့် ခုထိ ကျမလာပါဘူး လို့ ” Thestar သတင်းဌာနကို ရင်ဖွင့်သွားခဲ့သည် ။
ဆက်လက်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား အသက် 33 နှစ်ရှိသူ အေးငြိ်မ်းအောင် ရဲ့ပြောကြားချက်တွင် ။
“ကျွန်တော်က ပါမယ်သေတော့မယ် ဒါပေမယ့် ဝင်ငွေမကောင်းလို့မတိုးနိုင်တော့ဘူးလို့ ,, ” Thestar ကိုပြောကြားသွားခဲ့သည် ။
ထို့အတူ အဖမ်းခံရသော သူများအားလုံးက မိမိတို့၏ အိုဗာစတေးဖြစ်ရသော အဓိကအကြောင်းအရာများကို Thestar သတင်းဌာနသို့ပြောပြသွားကြပြီး
မလေးရှားသို့ 1995 ခုနှစ်ကတည်းက ရောက်ရှိအလုပ်လုပ်ကိုင်နေသော 35 နှစ်အရွယ် အလုပ်သမားတစ်ဦးပြောကြားချက်တွင်..
သူသည် 6P အစီအစဉ်က ပါမစ်လျှောက်ထားခဲ့ကြောင်း တကယ်တမ်း သွားရောက် ပါမစ်ပြုလုပ်သောအခါ ထိုသူ၏ နာမည် ၊ မွေးနေ့ ၊ ပတ်စပို့ နံပတ် အားလုံးတူညီ စွာနှင့် အခြားသူတစ်ဦးမှာ ပါမစ် ထုတ်သွားပြီးဖြစ်ကြောင်း …..
2011 သြဂုလ ကတည်းက ထိုသူ 6P တွင် ပါမစ်တင်ထားသော်လည်း ယနေ့ထိတိုင် အဆိုပါ ပြဿနာကြောင့် ပါမစ်မရရှိကြောင်းကို Thestar သတင်းဌာနသို့ ရင်ဖွင့်သွားခဲ့ကြောင်းသိရပါသည် ။
ယနေ့ ဖမ်းဆီးနေသာ Enforcement 6P ၏ စီမံချက် (အော်ပရာစီ) OPS 6P သည် အွန်လိုင်းပေါ်တွင် ဖွနေသော မဟုတ်မမှန်ကိစ္စ တစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းကို မနေ့က 1.9.2013 တစ်ရက်တည်းတွင် တိုင်းပြည်လုံးရှိနေရာစုံဖမ်းဆီးမှုက သက်သေပြသွားသည် ။
မှန်မှန် မမှန်မှန် စစ်ဆေးရန် ခေါ်ယူသွားပြီး မှန်ကန်သူများကို ပြန်လည် လွတ်ပေးသည် ။
ဖမ်းဆီးရရှိသူများကို တိုင်းပြည်ပြန်ပို့မည့် အစီစဉ်ဖြင့်သာ ဖမ်းဆီးနေခြင်းဖြစ်သည် ။
အဖမ်းခံရပါက မိမိတို့ အိုဗာစတေး ဖြစ်ရသည့် အဓိကအကြောင်းရာကို OPS 6P တွင် တရားဝင်တိုင်ကြားသွားနိုင်သည် ။
6P တွင် တရားဝင်ဆက်လက်မဆောင်ရွက်သော အေးဂျင်း နှင့် သူဌေး 4200 ကျော်ကိုအရေးယူမည်ဟု တရားဝင်ကြော်ငြာထားသည် ။
တရားဝင်နေထိုင်သူ အမှန်သမားများအတွက်မူ မိမိတို့ အလုပ်ရှင်နှင့် သေချာ စွာညှိနှိုင်းထားရန်နှင့် စစ်ဆေးရန် ခေါ်ဆောင်သွားပါက တရားဝင်လာရောက် ဖြေရှင်းပေးနိုင်ရန် သေချာစွာ ညှိနှိုင်းထားဖို့အထူးလိုအပ်သည် ။
အိုဗာစတေးသများများအတွက် ကျွန်တော်တို့ Facebook စာမျက်နှာက စိုးရိမ်ပူပန်မနေကြပဲ ဖြစ်လာသော အရာများကို တည်ငြိမ်စွာရင်ဆိုင်သွားရန် နှင့် မိမိတို့ အိုဗာစတေးသမားများမှ အေးဂျင်းလိမ်လည်ခံရပြီး ပါမစ်မရသောသူများအဖို့ OPS 6P တွင်တရားဝင်တိုင်ကြားရန် ဖြစ်ကြောင်းကို ….
မလေးရှားရောက်မြန်မာများ Facebook Fun Page မှ အကြောင်းကြားရင်း
နေ့စဉ်တင်ဆက်မှုများကို ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွာမည်ဖြစ်သည် ။
Source : Thestar , News Straight Time (NST) , BANAMA , MALAYSIAKINI ..
← Thailand reviews Myanmar’s complaint
President Thein Sein and Suu Kyi reportedly hold emergency meeting in Nay Pyi Taw →
Recent Posts	#ထိုင်းဖျော်ဖြေပွဲခရီးကိုဖျက်သိမ်းလိုက်တဲ့ ခင်လှိုင် #Khin #Hlaing canceled concert tour Thailand
#Russian #Frigate #Uses #Firearms to #Prevent #Collision With #Turkish #Vessel
Top Posts	Myanmar Sedona Hotel :နာမည်ကြီးနေသည့် ဆီဒိုးနားဟိုတယ် ဗွီဒီယို အပိုင်း(၁) ထွက်လာ၊ ဗွီဒီယိုထဲတွင် ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်လား၊ လူကြီးသားလား မကွဲပြား (18 + Video File)	#တိုက်ပွဲ #Update #သတင်း #WAR #NEWS #TNLA #FIGHTING #BURMESE #ARMY #20/1/2015	#พ่อ #โรส #เสื้อแดง #ระอาสันดานชั่วลูก #แจ้งกองปราบจับคดีหมิ่นเบื้องสูง	ALERT!!!! အဖျက်လုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ ရိုဟင်ဂျာ မွတ်စလင် ၃ဝဝ စစ်သင်တန်းတက်	#RIP #สิ้นแล้ว #อดีตมือกลองวงคาราบาว #ศยาพร #สิงห์ทอง หรือน้อง #คาราบาว #ที่ได้ถึงแก่กรรมในช่วงเช้าเมื่อวันที่6/3/57ที่ผ่านมา	There are two types of refugees in the camp, those who receivearefugee ration and those who do not. Those witharation need not worry about basic foodstuffs, while those without must rely on what they can scrounge from the forest and buy in the camp.	#UPDATE #19 ‪#‎ด่วน‬ ฮ. #รองแม่ทัพภาคที่3#ตก #คาดว่าเสียชีวิตทั้งลำ #9 #นาย @ #พะเยา	#update #MYANMAR #BURMA #GOVERNMENT #ARMY #RAPED AND #KILLED #2 #KACHIN #WOMEN 19/1.2015	แชร์ด่วน!! #คลิป #ความระยำ #ของ #เสื้อแดง และ #โกตี๋ !!-	ရခိုင်တွေဘက်မှာ … ရခိုင်ကလွဲလို့ ဘယ်သူမှမရှိဆိုတာ ရခိုင်တွေသိသင့်ပြီ...-ARAKAN WOMEN KILLED BY BENGALI illegal immigrants	88 students